XOG: Axmed Madoobe, Cabdirashiid Xidig & Cabdinaasir Seerar ma heshiis ayaa laga dhexwadaa?
KISMAAYO(P-TIMES) – Hoggaamiyaashii ugu badnaa oo xagga siyaasadda ah ayaa kusugan magaalada Kismaayo, waxaana halkaas sidaas oo kale kusugan labo siyaasi oo kala ah Cabdirashiid Xidig iyo Cabdinaasir Seerar oo labaduba sheegtay in ay yihiin Madaxweynayaasha Jubbalad, waxaana ay ka biyo diidsan yihiin doorashadii Axmed Madoobe.
Hogaamiyaashu waxay u tageen magaalada Caleema-Saarka Axmed Madoobe, dad badan oo Soomaaliyeed, waxay is weydiinayaan su`aasha ah xubnahan tagay oo dhan ma aqbali karaan in ay siyaasiinta arkaan.
Cabdinaasir Seeraar iyo Xidig labaduba waxay horey uga digeen imaanshaha xubnahan ee magaalada Kismaayo, waxayna sheegeen in aysan u imaanin Caleema-Saarka Axmed Madoobe oo ay ka soo horjeedeen.
Il gooni ah ayaa lagu eegayaa dhinacyada madaxda madashaas tagtay, gaar ahaana ku wajahan sida ay u wajahayan xal ka gaarida is faham daradda kajirta Jubbaland gudaheeda, waxaana haddii ay ku guuleystaan ay ka dhigan tahay guul weyn oo ay gaareen.
Warar hoose ayaa sheegaya in ay socdaan qorshe xubnaha mucaaradsan Axmed Madoobe iyo lagu wada hadalsiinayo, balse dadaaladaas ayaa ah kuwa gaabis ah xili ay jiraan mucaaradka qaarkood oo diidmo xoogan u muujinaya arrimahaas.
Lama garanayo, waxay ku dambeyn doonaan balse shaki maleh in khilaafka oo wali taagan ay ka dhigan tahay xaaladda aan fiicneyn oo sumcadda hoggaamiyaasha madasha tagay aan u fiicneyn.